We.com.mm - ဆယ်လီတွေဟာ သြစတေးလျဒီဇိုင်နာတွေရဲ့လက်ရာကိုနှစ်ခြိုက်ကြတဲ့သက်သေတွေပါပဲ
မီဂန်မာကယ်ကနေပြီးတော့ Gigi Hadid နဲ့Kendall Jennerတို့အပါအဝင်စူပါမော်ဒယ်တွေဟာ သြစတေးလျနာမည်ကြီးတံဆိပ်တွေကို နှစ်ခြိုက်စွာဝတ်ဆင်နေကြတာကိုမြင်နေရပါပြီ။ဒါကြောင့်ပဲသြစတေးလျဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ ခေတ်ရောက်လာပြီဆိုတာသိသာပါတယ်လေ။အခုဆိုရင် သြစတေးလျရဲ့နာမည်ကြီးတံဆိပ်တွေနဲ့ ဆယ်လီတွေရဲ့ပုံကိုမြင်ရမှာပါ။နာမည်ကြီးလှသလို ဖက်ရှင်ကျလွန်းလှတာဟာမငြင်းနိုင်ပါဘူး။သင်ကောဘယ်တစ်ခုကိုကြိုက်လောက်မလဲ…….
ရိုးရိုးလေးနဲ့အထာကျတဲ့ဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့Natalie Marie နဲ့မီဂန်မာကယ်ပါ။လည်ဆွဲကောလက်စွပ်တွေကော ဒီတံဆိပ်ချည်းပါပဲ။
Realization parနဲ့Kaia ကို ဖက်ရှင်ကျကျတွေ့ရတာကြောင့် သူမအကြိုက်ဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့။
စူပါမော်ဒယ် Kendallရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ Cara Delevigneပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Paper Towns ဇာတ်ကားရဲ့ ပွဲဦးထွက်မှာ Zimmermann ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။
Jenner ဟာဒီလို One Teaspoonအမှတ်တံဆိပ်ဂျင်းအဖြူဝတ်စုံကိုလည်းရွေးချယ်တတ်ပါသေးတယ်။
သြစတေးလျ ဒီဇိုင်းတွေကတော့ Kaia အတွက်ပထမအကြိမ်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ Alice McCall
အမှတ်တံဆိပ် အနက်အရောင်ဝမ်းဆက်လေးဟာ 'Bon Bon' collection ကပါ။
ကိန်းပွဲတော် အတွက်Bella Hadid ရွေးချယ်ခဲ့တာကတော့ ပခုံးပြတ် C/MEO Collective ပါပဲ။
New York fashion week မှာတော့ Gigi Hadid တစ်ယောက် bassike နဲ့လန်းခဲ့ပါတယ်နော်။
8.Camilla and Marc
Kendall ကို အဖြူရောင် Camilla and Marc ဝတ်စုံနဲ့Victoria's Secret fashion show မှာ တွေ့ရတာကြောင့် ဒီတံဆိပ်ဟာသူမအကြိုက်လို့ယူဆရမယ်ထင်ပါရဲ့။
9.Bec and Bridge
Kendall Jenner ဟာ Ellen Showအတွက်လည်း Bec and Bridge ရဲ့ ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
မီဂန္မာကယ္ကေနၿပီးေတာ့စူပါေမာ္ဒယ္ Gigi Hadid နဲ႔Kendall Jennerတို႔ဟာ ၾသစေတးလ်နာမည္ႀကီးတံဆိပ္ေတြကို ႏွစ္ၿခိဳက္စြာဝတ္ဆင္ေနၾကတာကိုျမင္ေနရပါၿပီ။ဒါေၾကာင့္ပဲၾသစေတးလ်ဒီဇိုင္နာေတြရဲ႕ ေခတ္ေရာက္လာၿပီဆိုတာသိသာပါတယ္ေလ။အခုဆိုရင္ ၾသစေတးလ်ရဲ႕နာမည္ႀကီးတံဆိပ္ေတြနဲ႔ ဆယ္လီေတြရဲ႕ပုံကိုျမင္ရမွာပါ။နာမည္ႀကီးလွသလို ဖက္ရွင္က်လြန္းလွတာဟာမျငင္းႏိုင္ပါဘူး။သင္ေကာဘယ္တစ္ခုကိုႀကိဳက္ေလာက္မလဲ…….
႐ိုး႐ိုးေလးနဲ႔အထာက်တဲ့ဒီဇိုင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့Natalie Marie နဲ႔မီဂန္မာကယ္ပါ။လည္ဆြဲေကာလက္စြပ္ေတြေကာ ဒီတံဆိပ္ခ်ည္းပါပဲ။
Realization parနဲ႔Kaia ကို ဖက္ရွင္က်က်ေတြ႕ရတာေၾကာင့္ သူမအႀကိဳက္ျဖစ္မယ္ထင္ပါရဲ႕။
စူပါေမာ္ဒယ္ရဲ႕ Kendall ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ Cara Delevigneပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ Paper Towns ဇာတ္ကားရဲ႕ ပြဲဦးထြက္မွာ Zimmermann ကိုေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။
Jenner ဟာဒီလို One Teaspoonအမွတ္တံဆိပ္ဂ်င္းအျဖဴဝတ္စုံကိုလည္းေ႐ြးခ်ယ္တတ္ပါေသးတယ္။
ၾသစေတးလ် ဒီဇိုင္းေတြကေတာ့ Kaia အတြက္ပထမအႀကိမ္မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ Alice McCall
အမွတ္တံဆိပ္ အနက္အေရာင္ဝမ္းဆက္ေလးဟာ 'Bon Bon' collection ကပါ။
Bella Hadid ကိန္းပြဲေတာ္ အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တာကေတာ့ ပခုံးျပတ္ C/MEO Collective ပါပဲ။
New York fashion week မွာေတာ့ Gigi Hadid တစ္ေယာက္ bassike နဲ႔လန္းခဲ့ပါတယ္ေနာ္။
Kendall ဟာ အျဖဴေရာင္ Camilla and Marc ဝတ္စုံကို Victoria's Secret fashion show မွာ ေတြ႕ရတာေၾကာင့္ ဒီတံဆိပ္ဟာသူမအႀကိဳက္လု႔ိယူဆရမယ္ထင္ပါရဲ႕။
Kendall Jenner ဟာ Ellen Showအတြက္လည္း Bec and Bridge ရဲ႕ ဝတ္စုံကိုဝတ္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။
2019 မှာ သိသိသာသာ ပိုလှလာခဲ့တဲ့ Taylor Swift
ပုံအသစ်တွေတင်ပြီး ရင်ဖိုအောင်ပြုစားကြတဲ့ မိန်းကလေးအနုပညာရှင်တို့ရဲ့ ဖက်ရှင်ပုံရိပ်များ
ငယ်ရုပ်မပျောက်တဲ့ Super Junior အဖွဲ့ဝင် ချွိုင်ဆီဝမ်ရဲ့ ငယ်ဘဝက ဓာတ်ပုံလေးများစုစည်းမှု
အသစ်အဆန်းတွေ အမြဲတမ်းထွင်တတ်တဲ့ Taylor